Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Foara Iraisam-pirenena momba ny zavakanto ankehitriny any Kyoto
Toerana lehibe an'ny ACK: Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto)
Natomboka vao haingana teo ambanin'ny lohahevitry ny "zavakanto sy fiaraha-miasa ankehitriny", Art Collaboration Kyoto (ACK) dia karazana tsenan-javakanto vaovao natao voalohany tao amin'ny prefektioran'i Kyoto. Io no iray amin'ireo foara lehibe indrindra any Japon natokana ho an'ny zavakanto ankehitriny ary hatao ao amin'ny Ivotoerana fihaonambe iraisam-pirenena Kyoto manomboka ny 5 ka hatramin’ny 7 Novambra no misolo tena mihoatra ny 50 galleries avy any Japon, Azia, Eoropa ary Amerika Avaratra sy Atsimo.
Ny ACK dia manantitrantitra karazana fiaraha-miasa efatra. Iray amin'izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny galleries Japoney sy any ivelany. Ny galleries japoney dia afaka manolotra ny fizarana habaka tranoheva miaraka amin'ireo galleries any ampitan-dranomasina hifandraisany. Amin'izany fomba izany, ny fironana manerantany amin'izao fotoana izao dia azo asongadina ary amin'ny fotoana iray ihany koa dia manome sehatra iraisam-pirenena ho an'ny mpanakanto Japoney. Ny iray hafa dia eo amin'ny sehatry ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ny fandraisan'anjaran'ny governemanta dia manampy amin'ny fampihenana ny saram-pivoarana amin'ny ankapobeny mifandraika amin'ny tsenan-javakanto, raha ny fandraisan'anjaran'ny sehatra tsy miankina kosa dia manome antoka ny fahaiza-manaony amin'ny fisarihana sy fankasitrahana ireo mpanakanto naseho. Ny karazana fiaraha-miasa fahatelo novolavolain'ny ACK dia hita taratra ao amin'ny rafitra 'talen'ny fiaraha-miasa' an'ny ACK izay tena ilaina amin'ny fanatanterahana ny tsenan'ny zavakanto avo lenta. Farany, manararaotra ny fanangonana ireo matihanina amin'ny zavakanto ankehitriny, ny fiaraha-miasa vaovao amin'ny sehatra hafa, toy ny teknolojia nomerika na ny fampiharana indostrialy, dia azo antenaina.
Hokarakaraina amin'ny fizarana roa ny kianjan'ny zavakanton'ny ACK - Gallery Collaborations, ahitana galleries 22 ao Japana ary trano fandraisam-bahiny 23 vahiny any ampitan-dranomasina, ary Kyoto Meetings, mifantoka amin'ny galleries 9 manolotra mpanakanto mifandray amin'i Kyoto. Ho fanampin'izany, ny ACK dia hanao an'i Beyond Kyoto amin'ny toerana malalaka ao amin'ny Foiben'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Kyoto ary ny Kyoto Next amin'ny Internet mba hanamafisana ny fahafahana mampita vaovao momba ny zavakanto ankehitriny Kyoto any ampitan-dranomasina. Ny zavakanto Kyoto, manomboka amin'ny asa tanana ka hatramin'ny ankehitriny, dia asongadina amin'ny fandaharana hafa toy ny Kyoto hafa 2021, fetiben'ny zavakanto karakarain'ny Prefektioran'i Kyoto izay atao amin'ny toerana samihafa manerana ny Prefektioran'i Kyoto, ary ireo hetsika atao manodidina ny tanànan'i Kyoto.
Nahemotra ny ACK noho ny valan'aretina COVID-19. Hotanterahina izao miaraka amin'ny fepetra feno mba hisorohana ny aretina. Raha toa ka sahirana amin'ny fandehanana any Japon ny galleries vahiny noho ny fameperana mifandraika amin'ny COVID, ny galleries mpampiantrano dia hanao fandaharana sy hampiseho ny sangan'asany, hiantoka ny fisian'ireo galleries vahiny ao amin'ny ACK. Ny sehatra nomerika dia ahafahan'ny fidirana an-tserasera amin'ny ACK.